खुसीको खबर ! अमेरिकाले डीभी जसैगरी कामदार भिसा पनि खुलाउँदै – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/खुसीको खबर ! अमेरिकाले डीभी जसैगरी कामदार भिसा पनि खुलाउँदै
खुसीको खबर ! अमेरिकाले डीभी जसैगरी कामदार भिसा पनि खुलाउँदै
अमेरिकी सरकारले कामदार भिसाको आवेदन डीभी लोटरी जसैगरि भर्न मिल्ने भएको छ । कामदारका लागि अमेरिकाले डीभी लोटरी जस्तै आवेदन लिएर भिसा दिने भएको हो । अमेरिकी सरकारले एचवानबीका लागि पनि अब डिभी लोटरीजस्तै विद्युतीय रुपमा दर्ता गरेर श्रमिक लिने भएको छ ।
आवेदन आगामी मार्च १ देखि खुल्नेछ भने मार्च २० सम्म भर्न पाइनेछ । कामदार भिसा एचवानबीमा दर्ता गर्नका लागि १० डलर दर्ता शुल्क तिर्नुपर्नेछ । गत नोभेम्बरमा अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले अन्तिम नियम प्रकाशित गर्दै कामदार भिसा एचवानबीका लागि दर्ता शुल्क १० डलर लिने जानकारी दिएको थियो ।
यो बर्षदेखि अमेरिकी सरकारले एचवानबी कामदार भिसामा नयाँ नियम ल्याएको हो । विद्युतीय रुपमा दर्ता हुने बाहेक अरु नियम सन् २०१९ देखि नै लागु गरिएको थियो । यसैबर्षदेखि लागु नयाँ नियमले अमेरिकन डिग्री नलिएका विदेशी कामदारलाई अमेरिका आउन थप मुस्किल बनाएको छ ।
तर अमेरिकन डिग्री होल्डरका लागि भने विगतको तुलनामा निकै सहज बनाएको छ । अमेरिकी सरकारले अमेरिकामा नै डिग्री लिएकाहरुलाई प्राथमिकता दिनेगरी कामदार भिसाको नयाँ नियम ल्याएको हो ।
५० हजार भूकम्पपीडितबाट पैसा फिर्ता गर्दै प्राधिकरण, अब गुनासोको सुनुवाइ अदालतबाट
नायिका श्वेता खड्काले जन्मदिनमा क्यान्सर पी’डितलाइ गरिन् यति ठूलाे सहयाेग
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो, काठमाडौमा अझै एक साता निषेधाज्ञा
कोरोनाको कहरले खोस्यो मिथिलामा राखीको रौनक